20+ Vokatry ny jQuery mamirapiratra | Famoronana an-tserasera
Fantatrareo rehetra fa ny jQuery dia paradisa tena misy vokany sary raha ny fanaovana sarimiaina toy ny fihodinana, ny zoma na ny slider, koa hahita ny fanangonana izay hahagaga antsika tokoa isika.
Ny vokany sasany dia efa sahala amin'ny an'i Apple miaraka amin'ny Retina Display an'ny iPhone 4-nao, ny fivezivezena ao anaty volo izay efa hitantsika tamin'ny fanangonana hafa na ny vokatry ny 'hover' izay tena mahaliana.
Aorian'ny fitsambikinana dia lasa izy ireo.
Loharano | 1stwebdesigner
1 1.Apple toy ny retina effet
3 3.Fizarana sary miavaka tsara
4 4.Bg sary mihetsika
5 5.Bugble Navigation
6 6. tontonana fidirana mandroso
7 7. Famoronana karaoty
8 8. Manodina
9 9. Zoom zoom
10 Boaty 10.Flip
11 11. Galerie fanovana
13 13.Fampitana sary
14 14. Sary mahaliana
15 15.Jqfancy tetezamita
16 16.Jquery dj mahery
17 17. Plugin Jery ho an'ny sari-tany azo zahana
19 19.Panning sary mihetsika
20 20. sary fitifirana
21 21. Fasika haingana
22 22. Soso-kevitra momba ny toe-javatra manodidina
23 23. boaty mitsoraka
24 Galerie 24.zoomer
1.Apple toy ny retina effet
3.Fanamoriana sary tsara tarehy
4.Bg sary mihetsika
6. tontonana fidirana mandroso
16.Jquery dj mahery
17.Jquery plugin ho an'ny sarintany ifandraisana azo zahana
19.Mampandeha ny masotantelin-tsary
22.Soso-kevitra momba ny sahan-tsary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » jQuery » 20+ Vokatry ny jQuery mamiratra
pugs dia hoy izy:
Fany, efa nijery aho ary tsy haiko hoe maninona ianao no tsy mety, raha ny fitsipika dia tsy maninona na aiza na aiza no hametrahanao ny + raha mbola afindrao tsara ...
Miala tsiny fa tsy afaka manampy anao aho.
Valiny tamin'i Carlinhos
Fany lopez dia hoy izy:
Salama! Te hahafantatra aho raha afaka manome tariby kely amiko ... hitanareo, miasa miaraka amin'ny laharana 14 amin'ity lisitra ity aho, miaraka amin'ny sary mifanakalo. Mahatalanjona ny zavatra azo atao, saingy mijanona aho, tsy afaka mamindra ilay "+" satria, raha hafindraiko izy ireo, dia tsy hiseho eo akaikiko ilay famaritana ary tsy hisokatra miaraka amin'ny effet lightbox ny sary ... andao handeha loza tanteraka ... ny hevitro dia ny fampiasana sary misy olona 15 ary samy manana ny "+" azy manokana ny tsirairay, saingy tsy azoko atao koa ny manao azy ireo satria rehefa mandika sy mametaka ilay kaody aho dia tsy mandeha ihany koa. .. lasa adala aho ^^ azonao omena tanana kely azafady ?? Misaotra betsaka mialoha !!!! Manantena aho fa ny valinteninao !!
Valiny tamin'i Fany Lopez
Misaotra betsaka anao ihany !!! Hey, ary ahoana no hataonao amin'ny famindrana azy? Andao hojerentsika raha mikorontana izany aho, lol Hiezaka aho hijery azy fanindroany ^^ U Misaotra anao indray !!!!! =)
Tsy dia tsara amin'ny Chrome / Mac OSX ny tranokala;)
Mianjera ihany koa amin'ny FF 3.6 / Mac OSX;)
Misaotra noho ny fanampiana, tena tsara
Crayon dia hoy izy:
Oay! Tsy mampino izany! Androany aho nanomboka nampiasa jquery.
Valiny tamin'i Crayola
Web Adhara dia hoy izy:
Tena tsara, fa mitady vokatra vaovao aho
Valio amin'ny tranokala Adhara
Salama, ahoana no ahafahako mamorona gif iray izay misy rotaka misy saripika fianakaviana mihodina, mpankafy aho Misaotra anao noho ny fanampianao, amin'ny sehatra an-tserasera maimaim-poana? Manontany be aho, sa tsy izany? Hahaha misaotra
Mamaly an'i virginia